Xuquuqda ka jirta Iswiidhan | RFSL Ungdom
Xuquuqda ka jirta Iswiidhan
Muxuu sharciga ina farayaa?
Sharciga iswiidhishka waa ka mamnuuc in dad la takooro ama loo cagojugleeyo. Waxaa jira qodobbo gaar ah ee ilaalinaya xuquuqda dadka cadaadiska loogu geysto hannaankooda galmo ama trans-nimadooda. Sharciga wuxuu khuseeyaa hadii masalan takoor uu kaa soo gaaro shaqobixiye, iskuul, jaamacad, goob daryeel caafimaad ama adeegga bulshada. Waxaa warbixin ku qoran af-ingriis oo ku saabsan sharciyada ka hortagga takoorka laga helayaa Wakiilka dadka takooran Waxaad la xiriiri kartaa wakiilka dadka takooran si aad uga hesho warbixin, taakulo iyo caawino sharci.
Dembi naceyb loo galo
Sharciga iswiidhiska wuxuu leeyahay qodobbo gaar ah ee lagu ilaalinayo xuquuqda dadka ama kooxaha laga galo dembiyo naceyb. Dembi naceyb waa marka qof uu qof kale dembi uga galo naceyb uu u qabo qolada uu qofkaa la xumeeyey ka midka yahay daraadeed. Waxey taasu khuseyn kartaa in qofka dembiga geysanaya uu naceb yahay ama ay karaahiyo la yihiin trans, homo ama bi, ama dad diin gaar ah aaminsan ee ka soo jeeda qowmiyado ama dalal gaar ah.
Masalan waxaa dembi naceyb noqon kara qof qof kale inta siduu u garaacayo dhulka dhigo oo misna ugu yeero "belo khaniis ah", ama qof ardayda fasalka la dhigta midkood marar badan oo soo noqnoqda u cagojugleeya oo ku yiraahda "belo ajnabi ah" ama "madaxmadow". Fall dembiyeedyada oo dhan salka wey ku hayn karaan sabobo naceyb ah oo haddii dembi loo arko inuu yahay dembi naceyb waxey taasu keeni kartaa in dembiilaha iqaabta lagu adkeeyo. Taa waxaa il dheeraad ah ku haya wax la yiraahdo sharciga adkaynta iqaabta, kaasoo isku si u difaacaya trans, homo iyo bi.
Sidoo kale waa mamnuuc in loo hanjabo ama si uun loo caayo dad koox ah, iyadoo loo maldahayo midabkooda, jinsiyadda ama qowmiyadda ay ka soo jeedaan, diinta ay aaminsan yihiin ama hannaankooda galmo. Taa waxaa loo yaqaan dabogal dad gaar ah.
Haddaad u aragto in dembi lagaa galay waa muhiim inaad dacwad taa uga geysaa booliska. Waxaad taakulo iyo caawinoba xagga geynta dacwada heli kartaa adigoo la xiriira Heeganka dhibbanayaasha RFSL ama BOJ (Xiriirka guud ee heeganka dhibbanayaasha) ka waca telefonlambar 08-642 00 44. BOJ wuxuu xaafiisyo ku leeyahay qiyaastii boqol degmo ee ku kala yaal Iswiidhan oo dhan, waxaana caawino looga heli karayaa luuqado farobadan.